AA ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွတ်လာရေး ရည်ရွယ်တဲ့ မန္တလေးမြို့လှုပ်ရှားမှု - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
AA ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွတ်လာရေး ရည်ရွယ်တဲ့ မန္တလေးမြို့လှုပ်ရှားမှု
AA ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူတွေ ပြန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရဲပရဟိတ ကူညီရေးအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး မန္တလေးမြို့မှာ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ဆုတောင်းပွဲပြလုပ်စဉ်
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူများထဲမှာ မန္တလေးဘက်ကလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မန္တလေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါ်ခင်သန်းညွန့်က AA လက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သားဖြစ်သူ ဒုရဲအုပ် မျိုးကိုကို ရဲ့ အခြေအနေကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။ အထိန်းသိမ်းခံနေရသူတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုလည်း မန္တလေးမှာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။.
ဒေါ်ခင်သန်းညွန့်က သားဖြစ်သူ ဒု ရဲအုပ် မျိုးကို ကို အဲဒီလို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာကို သတင်းမီဒီယာက တဆင့်သာ သိရှိရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာ သုံးနှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုရဲအုပ်မျိုးကိုကိုဟာ အဲဒီနေ့က အပေါက်ဝရဲစခန်းကနေ စစ်တွေကို အမှုတွဲသွားပို့တဲ့ လမ်းခရီးမှာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာဖြစ်တယ်၊ အချိန်အားဖြင့် ၂၈ ရက် ကြာသွားပြီလို့ ဒေါ်ခင်သန်းညွန့်က ပြောပြပါတယ်။
“ဓာတ်ပုံတွေ တက်လာတော့ အသက်ရှင်လျက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလေးတော့ သိထားပါတယ်။ ရှေ့ဆက်လည်း ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ထိလည်း စားလို့လည်း မရဘူး၊ သွေးစိမ်ရှင်ရှင်ထွက်သလို ခံစားရတယ်။ ချွေးမလေးဆို ပူဆွေးသောကရောက်နေတယ်။ မန္တလေးက ပြည်ကြီးတံခွန်မှာနေတာပါ။ သားနဲ ပြည်သူပြည်သားတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ ကယ်ပေးပါ။ တာဝန်ကျတာ သုံးနှစ်ရှိလို့ ပြောင်းရခါနီးပြီ၊ အဲဒီနေ့က စစ်တွေဘက်ကို အမှုတွဲသွားပို့တာ။ လမ်းမှာ၊ ကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ဆွဲချခံရတာ။ တာဝန်နဲ့သွားရင်း ဖမ်းခံရတာ၊ တခါမှာ ဒီလိုမကြားဖူးပါဘူး”
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစု တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မထားယုခိုင် ကလည်း ဒီကနေ့ဆုတောင်းပွဲမှာ အခုလိုတောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။
"တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း စိတ်ဓာတ်သာတူညီမျှခံစားရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ လာဝန်းရံတာပါ"
မကြာသေးခင်က AA ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူတွေထဲမှာ မီးသတ်သမားတစ်ဦး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတစ်ဦးတို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သေဆုံးတာဟာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလို့ မဟုတ်ဘဲ တောင်အတက်အဆင်းရှိတဲ့လမ်း ခရီးသွားကြချိန်မှာ သေဆုံးတာလို့ AA က ပြောပါတယ်။ မေယုမြစ်အတွင်း အမြန်ရေယာဉ်ပေါ်ကနေ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်ခံရသူတွေထဲက တချို့သေဆုံးကြတာကတော့ တပ်မတော်က သူတို့ကို သွားရောက်ကယ်ဆယ်ချိန် ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတချို့ဟာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး AA အဖွဲ့ရဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာခံနေရပါတယ်။
ရဲပရဟိတအဖွဲ့ကလည်း AA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဟာ သုံ့ပန်းတွေမဟုတ်ပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မန္တလေးမြို့၊ မဟာမုနိဘုရားကြီးမှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အခုလိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် စေချင်တယ်လို့ ရဲပရဟိတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမြတ်သူဟိန်းက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေက သုံ့ပန်းတွေမဟုတ်ပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့၊ မဟာမုနိ ဘုရားကြီးမှာ ရဲပရဟိတအဖွဲ့က ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဆုတောင်းပွဲကို အင်အား ၁၀၀ ခန့်နဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ခဲ့ပေမဲ့ ဘုရားပေါ်မှာဖြစ်လို့ ခွင့်ပြုချက် မရရှိခဲ့တာကြောင့် ရဲပရဟိတအဖွဲ့ဝင် ၆ ယောက်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်တပ်မတော်အေအေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်တို့ဟာ အခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ တိုက်ပွားဖြစ်ပွားတာတွေ ခပ်စိတ်စိတ် ဖြစ်လာနေပြီး အေအေဘက်ကလည်း အစိုးရသတင်းပေးဆိုကာ သံသယရှိသူတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ် သလို မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်း အေအေအဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ သံသယရှိသူတွေကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ AA အဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုးဦး၊ တပ်မတော်သား ခြောက်ဦး၊ အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်း တစ်ဦး၊ တပ်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦး စုစုပေါင်း ၁၇ ဦးကို သုံ့ပန်းချင်း လဲလှယ် လိုကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သုံ့ပန်းလဲလှယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
AA ရက္ခိုင့်တပ်တော်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက် AA က ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ သုံ့ပန်းလဲ လှယ်ရေး အစီအစဉ်ကို လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ နိုဝင်ဘာလ၁၅ ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ သမ္မတရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောဆိုထားပါတယ်။
AA ဖမျးထားသူမြား ပွနျလှတျလာရေး ရညျရှယျတဲ့ မန်တလေးမွို့လှုပျရှားမှု
AA ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားသူတှေ ပွနျလှတျမွောကျရေးအတှကျ ရဲပရဟိတ ကူညီရေးအဖှဲ့က ဦးဆောငျပွီး မန်တလေးမွို့မှာ ၂၀၁၉ နိုဝငျဘာ ၂၆ ရကျနကေ့ ဆုတောငျးပှဲပွလုပျစဉျ
ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA က ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားသူမြားထဲမှာ မန်တလေးဘကျကလညျး ပါဝငျပါတယျ။ မန်တလေး၊ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျမှာ နထေိုငျတဲ့ ဒျေါခငျသနျးညှနျ့က AA လကျထဲ ရောကျနတေဲ့ သားဖွဈသူ ဒုရဲအုပျ မြိုးကိုကို ရဲ့ အခွအေနကေို စိုးရိမျနပေါတယျ။ အထိနျးသိမျးခံနရေသူတှေ လှတျမွောကျရေးအတှကျ ရညျရှယျတဲ့ လှုပျရှားမှု တဈခုလညျး မန်တလေးမှာ ဒီကနေ့ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။.
ဒျေါခငျသနျးညှနျ့က သားဖွဈသူ ဒု ရဲအုပျ မြိုးကို ကို အဲဒီလို ဖမျးဆီးချေါဆောငျခံရတာကို သတငျးမီဒီယာက တဆငျ့သာ သိရှိရတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျကို ပွောငျးရှတေ့ာဝနျထမျးဆောငျနရေတာ သုံးနှဈကွာပွီဖွဈတဲ့ ဒုရဲအုပျမြိုးကိုကိုဟာ အဲဒီနကေ့ အပေါကျဝရဲစခနျးကနေ စဈတှကေို အမှုတှဲသှားပို့တဲ့ လမျးခရီးမှာ ဖမျးဆီးချေါဆောငျခံရတာဖွဈတယျ၊ အခြိနျအားဖွငျ့ ၂၈ ရကျ ကွာသှားပွီလို့ ဒျေါခငျသနျးညှနျ့က ပွောပွပါတယျ။
“ဓာတျပုံတှေ တကျလာတော့ အသကျရှငျလကျြနဲ့ရှိတယျဆိုတာလေးတော့ သိထားပါတယျ။ ရှဆေ့ကျလညျး ဆုတောငျးပါတယျ။ ဒီနထေိ့လညျး စားလို့လညျး မရဘူး၊ သှေးစိမျရှငျရှငျထှကျသလို ခံစားရတယျ။ ခြှေးမလေးဆို ပူဆှေးသောကရောကျနတေယျ။ မန်တလေးက ပွညျကွီးတံခှနျမှာနတောပါ။ သားနဲ ပွညျသူပွညျသားတှကေို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ ဗိုလျခြုပျမငျးအောငျလှိုငျတို့ ကယျပေးပါ။ တာဝနျကတြာ သုံးနှဈရှိလို့ ပွောငျးရခါနီးပွီ၊ အဲဒီနကေ့ စဈတှဘေကျကို အမှုတှဲသှားပို့တာ။ လမျးမှာ၊ ကားပျေါမှာ တဈယောကျတညျး ဆှဲခခြံရတာ။ တာဝနျနဲ့သှားရငျး ဖမျးခံရတာ၊ တခါမှာ ဒီလိုမကွားဖူးပါဘူး”
ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမိသားစု တဈယောကျဖွဈတဲ့ မထားယုခိုငျ ကလညျး ဒီကနဆေု့တောငျးပှဲမှာ အခုလိုတောငျးဆို ခဲ့ပါတယျ။
"တပျဖှဲ့ဝငျအခငျြးခငျြး စိတျဓာတျသာတူညီမြှခံစားရပါတယျ။ အဲဒီစိတျဓာတျနဲ့ လာဝနျးရံတာပါ"
မကွာသေးခငျက AA ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားသူတှထေဲမှာ မီးသတျသမားတဈဦး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံသားတဈဦးတို့ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ သူတို့သဆေုံးတာဟာ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျခံရလို့ မဟုတျဘဲ တောငျအတကျအဆငျးရှိတဲ့လမျး ခရီးသှားကွခြိနျမှာ သဆေုံးတာလို့ AA က ပွောပါတယျ။ မယေုမွဈအတှငျး အမွနျရယောဉျပျေါကနေ ဖမျးဆီးချေါ ဆောငျခံရသူတှထေဲက တခြို့သဆေုံးကွတာကတော့ တပျမတျောက သူတို့ကို သှားရောကျကယျဆယျခြိနျ ပဈခတျမှုတှကွေောငျ့လို့ သိရပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျထဲ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဌာနဆိုငျရာ ဝနျထမျးတခြို့ဟာလညျး ရခိုငျပွညျနယျ တိုကျပှဲတှနေဲ့ ဆကျစပျပွီး AA အဖှဲ့ရဲ့ ဖမျးဆီးထားတာခံနရေပါတယျ။
ရဲပရဟိတအဖှဲ့ကလညျး AA ရဲ့ဖမျးဆီးခွငျးခံထားရတဲ့ နိုငျငံဝနျထမျးတှဟော သုံ့ပနျးတှမေဟုတျပါဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ မန်တလေးမွို့၊ မဟာမုနိဘုရားကွီးမှာ ဒီကနေ့ မနကျပိုငျးက ဆုတောငျးပှဲပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
တာဝနျထမျးဆောငျရငျး အခုလိုဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ရဲဝနျထမျးတှနေဲ့ နိုငျငံဝနျထမျးတှေ အမွနျဆုံး လှတျမွောကျ စခေငျြတယျလို့ ရဲပရဟိတအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ ကိုမွတျသူဟိနျးက ပွောပါတယျ။
နိုငျငံဝနျထမျးတှကေ သုံ့ပနျးတှမေဟုတျပါဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ဒီကနမေ့နကျပိုငျးက မန်တလေးမွို့၊ မဟာမုနိ ဘုရားကွီးမှာ ရဲပရဟိတအဖှဲ့က ဆုတောငျးပှဲပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဆုတောငျးပှဲကို အငျအား ၁၀၀ ခနျ့နဲ့ ပွုလုပျဖို့ ခှငျ့ပွုမိနျ့တငျခဲ့ပမေဲ့ ဘုရားပျေါမှာဖွဈလို့ ခှငျ့ပွုခကျြ မရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ရဲပရဟိတအဖှဲ့ဝငျ ၆ ယောကျနဲ့ ပွုလုပျခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရခိုငျတပျမတျောအအေနေဲ့ မွနျမာစဈတပျတို့ဟာ အခုနှဈတှအေတှငျးမှာ တိုကျပှားဖွဈပှားတာတှေ ခပျစိတျစိတျ ဖွဈလာနပွေီး အအေဘေကျကလညျး အစိုးရသတငျးပေးဆိုကာ သံသယရှိသူတှကေို ဖမျးဆီးတာတှပွေုလုပျ သလို မွနျမာစဈတပျဘကျကလညျး အအေအေဖှဲ့နဲ့ သကျဆိုငျတယျလို့ သံသယရှိသူတှကေို ဖမျးဆီးစဈဆေး တာတှပွေုလုပျပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နိုဝငျဘာ ၁၂ ရကျစှဲနဲ့ ထုတျပွနျတဲ့ AA အဖှဲ့ရဲ့ ကွညောခကျြမှာ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ကိုးဦး၊ တပျမတျောသား ခွောကျဦး၊ အကဉျြးဦးစီးဝနျထမျး တဈဦး၊ တပျအငျဂငျြနီယာ တဈဦး စုစုပေါငျး ၁၇ ဦးကို သုံ့ပနျးခငျြး လဲလှယျ လိုကွောငျး ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
သုံ့ပနျးလဲလှယျရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောဘကျက လကျမခံနိုငျဘူးလို့ ငွငျးဆိုထားပါတယျ။
AA ရက်ခိုငျ့တပျတျောရဲ့ လုပျရပျတှဟော ဥပဒနေဲ့မညီတဲ့အတှကျ AA က ကမျးလှမျးထားတဲ့ သုံ့ပနျးလဲ လှယျရေး အစီအစဉျကို လကျခံမှာမဟုတျဘူးလို့ နိုဝငျဘာလ၁၅ ရကျနကေ့ပွုလုပျတဲ့ သမ်မတရုံး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ သမ်မတရုံး ပွောခှငျ့ရသူ ဦးဇျောဌေးက ပွောဆိုထားပါတယျ။